I-Apple ithetha ngekamva leentambo ze-Apple Watch | Iindaba ze-iPhone
I-Apple ithetha ngekamva leebhendi ze-Apple Watch
UAlex Vicente | 05/12/2021 19:00 | Apple Watch
Kudliwano-ndlebe olutsha, abaphathi ababini be-Apple baye bakwazi ukuphawula Uluhlu olubanzi kunye namathuba okuba i-Apple Watch inawo kwimitya, uyilo lwazo kunye nayo yonke into esemva kwayo.
U-Evans Hankey, uSekela Mongameli woYilo lwezoShishino kwi-Apple kunye noStan Ng, uSekela Mongameli weNtengiso yeMveliso, bahlomle ngeHypebeast kwimitya ye-Apple Watch. Ukuba ungabasebenzisi be-Apple Watch, uya kulwazi uluhlu olubanzi lweentlobo, izixhobo kunye nemibala ekufuneka siyenzele umntu isixhobo sethu ngendlela eguquguqukayo, siyiqhelanisa nesihlandlo ngasinye, sibe sesinye sezixhobo ekutyalwa kuzo kakhulu. imveliso kaManzana.
Kwithuba lokutshintsha iifowuni, isitayile somtya wakho kunye nombala wayo, kunye nombala kunye nezinto zeApple Watch ngokwayo, uHankey uthi abasebenzisi "banenani elimangalisayo lendibaniselwano enokwenzeka" ukuchaza isimbo sabo ngexesha ngalinye.
Enye yeempawu ezibonisa i-Apple Watch kulo mba, kukuba iintambo zisisebenzela ukusuka kwimodeli ukuya kwimodeli, ukusuka komnye unyaka ukuya komnye, ukuba nje sigcina ubungakanani bewotshi yethu. Ngokomzekelo, nge-Apple Watch Series 7 entsha, i-Apple yandisa ubungakanani bewotshi ukuya kwi-41 kunye ne-45mm, kodwa iibhendi kwiimodeli ze-40 kunye ne-44mm ziyahambelana nokunyuka kwazo okuhambelanayo.
UHankey wayefuna ukugxininisa oko Ukugcina oku "kuhambelana ngasemva" phakathi kweebhendi ezindala kunye neemodeli ezintsha yenye yezinto eziphambili zeqela le-Apple Watch. Into ethi, ngokobuqu, isiqinisekisa kakhulu. Ukwazi ukuba imali esiza kutyalomali kwiibhanti kuyo nayiphi na imodeli iya kusisebenzela, ngokungathandabuzekiyo isikhuthazo sokuqhubeka nokwenza njalo.
Ukusukela kwi-Apple Watch yokuqala ukuya kuthotho lwangoku lwe-7, ukutshintshiselana kube sisiseko semveliso. Ukusuka kwisitayile kunye nombala womtya, izinto zokubukela kunye nobuso obukhethileyo kunye nohlengahlengiso, iApple Watch ibonelela ngenani elimangalisayo lokudityaniswa okunokwenzeka, kubalwa kumawaka. Ngalo lonke ixesha sicoca uyilo lwe-Apple Watch, sizamile ukugcina ukuhambelana neemodeli zangaphambili, nangona umboniso ukhulile ngokuhamba kweminyaka.
Kithina, umtya awungombandela wetekhnoloji kuphela: umtya ngamnye ubonisa uthando lwethu ngezinto, ubugcisa kunye nenkqubo yokuvelisa.
Ngaphandle kwayo yonke loo nto kuye kwathethwa kwaye ikwazile ukuphuma kumalungelo awodwa omenzi wechiza, Iintambo ze-Apple Watch azibandakanyi nayiphi na iteknoloji, kodwa ukuyila kwabo kudlala indima ebalulekileyo ngokodliwano-ndlebe nabo ukuqinisekisa ukuba ukusebenza kwe-Apple Watch akuphazanyiswa. UNg uthe imitya ye-Apple Watch ibonisa "ubuchule" bokuqinisekisa ukuba bakhululekile kwaye abawonakali amava e-Apple Watch.
Kucacile ukuba i-Apple Watch straps lishishini elijikelezayo le-Apple kwaye sitsalwe kakhulu njengabasebenzisi. Ngokuqinisekileyo siyakhululeka ukwazi ukuba, kubonakala ngathi, siya kuba nakho ukuqhubeka nokusebenzisa imitya yethu kwiimodeli ezizayo zewotshi yeCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple ithetha ngekamva leebhendi ze-Apple Watch
Ezi ibe zezona Emojis zidumileyo zika-2021